Global Voices teny Malagasy » Maraoka:Mitohy ny ady atao amin’ny mpanao gazety · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Desambra 2009 7:34 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika Candy
Sokajy: Maraoka, Fahalalahàna miteny
Manamafy ny fanenjehana ireo mpanao gazety miahy tena ny manampahefana Maraokana. Mahàlana izany hoe herinandro iray tsy ahitana ny fanjakana manameloka mafy ny asa fanaovan-gazety izany, na ny an-tsoratra na ny media amin'ny aterineto. Ny mpiaro ny fahalalahana manao gazety toy ny Reporters Without Borders  izao dia mitsara ny zava-mitranga amin'ny fahalalahana manao gazety ao amin'ny firenena ho “sarotra”, amin'ny fanamelohana “rafi-pitsaràna mamoaka andian-tsazy noforonina mba hanakivy sy hanakenda ny lafiny ara-bolan'ny fanaovan-gazety tsy miankina.”
Ny fanenjehana farany voarakitra izao dia ny didy famonjàna navoakan'ny fitsaràna ao Casablanca ny Alatsinainy teo ho an'i Said Laâjal, mpanao gazety ao amin'ny Al Massa'e, gazety mpivoaka isan'andro tena be mpamaky, sy ny mpiandraikitra ny fanontàna azy, Rachid Nini, mpanoratra “chroniques” fanta-daza. Ireo mpanoratra roa ireo moa dia samy voarohirohy ho “namoaka vaovao tsy marina” mifandraika amina lahatsoratra mahakasika raharaha-na zava-mahadomelina. Nanambara i Nini fa tsy hanao fampakarana ny didy nivoaka izy. (loharanom-baovao: AFP) Niady hevitra momba izany sy ny fizotry ny raharaha ireo mpitoraka blaogy.
eatbees, mpanoratra Amerikana, mpaka sary ary mpitoraka blaogy monina any Maroka dia manahy  momba izay tena tanjon'ireo mpampanoa lalàna. Manoratra izy:
Fanamelohana an-kitsirano sy tsy ahoan-tsy ahoana ny fanaovan-gazety izao. Manao hadisoana sy mitatitra vaovao mety tsy ho marina ireo mpanao gazety indraindray. Misy ireo fomba famahàna izany, nefa tsy anisan'ireny ny fandefasana ireo mpanao gazety any am-ponja. Manahy mafy aho fa nanaovana tsindrihazolena i Nini sy Laâjal, tsy noho ity zava-nitranga ity, fa noho izy ireo manohitonhina olona manana toerana ambony. Na mety ho fomba hanenjehana an'i Nini fotsiny izao, izay amin'ny maha-mpamoaka ny gazety Maraokana be mpamaky indrindra sy mpanoratra ny fanehoan-kevitra be mpamaky indrindra azy any Maraoka, dia lasa ivon-kery amin'ny zony manokana.
Raha tena tapa-kevitra ny tsy hampakatra marina ny didy momba azy i Nini, ka mandeha any am-ponja, dia ho fihetsika maneho herim-po sy tsy fankatoavana sivily izany. Hahatonga azy ho maritiora ho an'ny fahalalahana manao gazety eo imason'ny Maraokana an-tapitrisany izany. Mazotoa amin'izany, ry firenena Maraokana.
Tsara ny manamarika fa efa eo ambany vesatry ny onitra goavana noho ny fanaparitahana vaovao tsy marina ilay mpanao gazety, izay mety hahaborona ny fanontàna iray manontolo, araka ny nosoratan'ilay mpitoraka blaogy  Ibn Kafka [Fr], mikasika taratasy iray nolazaina ho nosoratan'i Nini, mangataka ny famelan'ny mpanjaka:
Mahavelona tsara an'i Nini io orinasam-panaovan-gazetiny io (mifandraika amin'ny tontolo rotika misy ny haino aman-jery Maraokana) …
Mino ny sasany fa nandefa taratasy fitalahoana tany amin'ny mpanjaka i Nini nangatahany fanafoanana ireo helony – raha tsorina, fangatahana famotsoran-keloka ho an'ilay gazetiny. Tsy misy fanamarinana izany vaovao izany, izy tsy maharikoriko rahateo koa.
Vao haingana no nisy adihevitra mifanohitra momba an'i Rachid Nini tamin'izy nitsipaka am-pahibemaso iray tamin'ireo mpanao gazety tao aminy izay naneho ny fanohanany mpiara-miasa iray voarahona sy voahenjiky ny governemanta. Larbi, izay mitoraka blaogy ao amin'ny Comme une bouteille jetée à la mer!, dia milaza [Fr] fa tsy tokony hampidirana an'i Nini any am-ponja izany na handraisana ilay mpanao gazety ho mahery fo. Manoratra izy:
Soa ihany fa tsy mitovy ny fahatakaran'ny rehetra sy Atoa Nini ny fahalalahana maneho hevitra sy ny falalahana manao gazety. Tsy any am-ponja no toerana tokony hisy ireo mpanao gazety fa any amin'ny biraony. Ho an'ny mpanao gazety rehetra izany. Ho an'Atoa Nini inhany koa. Ary na ho an'i Said Laâjal aza. Tsy any am-ponja no tokony hisy an'i Rachid Nini sy Said Laâjal fa any amin'ny biraony tsirairay avy. Mazava ho azy fa manohana an'i Rachid Nini sy Said Laâjal aho, satria ny sazy fampidirana am-ponja azy ireo dia tsy rariny raha jerena ny zavatra iampangàna azy. Ary satria na Atoa Nini aza dia manana zo amin'izay nolaviny foana tamin'ny hafa: izany hoe ny fanaovana ny asany amin'ny maha-mpanao gazety azy ary malala-pitenenana, tsy misy fampitahorana sy fitsaràna tsy marina mitondra amina sazy mahasosotra.
Hevitra iray nozarain'i Naoufel izay manazava [Ar] fa tokony ho an'ny tsirairay ny Fahalalahana fanaovan-gazety, na ho an’ Atoa Nini aza. Manoratra izy:
Amiko i Nini dia tia midera tena, mpanararaotra ary mahasosotra (sic). Manoratra zavatra mifanohitra amin'ireo rehetra izao izy, afa-tsy ny mpanjaka… Mametraka ny governemanta, ny vahoaka ary ireo mpiara-miasa aminy eo anoloan'ny fitsaràna nefa tsy sahy mandeha n'aiza n'aiza manodidina ny rovan'ny mpanjaka, na ny zandriny indrindra amin'ireo zaza ao amin'ny fanjakàna Sherifian (taranaky ny mpaminany) aza dia mahafantatra, izay marihana fa tsy Sherifian intsony, fa na ny fanapahan-kevitra faran'izay kely indrindra aza dia tsy manan-kery raha tsy mandalo any amin'ny Mpanjaka.. Nanoratra manohitra ireo mpiara-miasa aminy izy… Ankehitriny, tokony hanohana azy ve isika? Mieritreritra aho fa tsy manan-tsafidy ankoatra izay isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/12/04/4290/
 dia manahy: http://www.eatbees.com/blog/2009/11/16/criminalization-of-journalism/
 nosoratan'ilay mpitoraka blaogy: http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2009/08/21/lettre-de-supplication-de-rachid-nini-au-roi-mohammed-vi/
 milaza : http://www.larbi.org/post/2009/11/Rachid-Nini-condamn%C3%A9